सुनको मूल्यमा रु. एक हजार ६०० वृद्धि - Online Majdoor
काठमाडौं, १८ मङ्सिर । स्थानीय बजारमा बिहीबार सुनको मूल्य प्रतितोला रु. एक हजार ६०० ले उकालो लागेको छ । बुधबारको तुलनामा आज छापावाला सुन प्रतितोला रु. एक हजार ६०० ले वृद्धि भई रु. ९२ हजार ६०० मा कारोबार भएको छ । बुधबार छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला रु. ९१ हजारमा कारोबार भएको थियो ।
यस्तै तेजाबी सुन पनि तोलामा रु. एक हजार ६०० ले नै वृद्धि भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । प्रतितोला रु. ९० हजार ५५० मा बुधबार कारोबार भएको तेजाबी सुन आज प्रतितोला रु. ९२ हजार १५० मा खरीदबिक्री हुने गरी मूल्य निर्धारण गरिएको छ ।
यस्तै चाँदीको मूल्य प्रतितोला रु. २० ले वृद्धि भएको छ । प्रतितोला रु. एक हजार १८५ मा बुधबार कारोबार भएको चाँदी बिहीबार भने प्रतितोला रु. एक हजार २०५ मा खरीदबिक्री भएको छ ।
‘श्रमिक’ साप्ताहिकबारे गोष्ठी
लकडाउनमा कुुखुरापालन व्यवसाय
माथिल्लो तामाकोसीको शेयरमा सकारात्मक सर्किट
तोलामा रु.८०० ले बढ्यो सुनको मूल्य